Umnqweno oyintloko kukuvelisa uqobo!
Umnqweno oyintloko kukuvelisa uqobo, kodwa njani ukuphakamisa umqobo? Ziyavela phi ezi zintlanzi? Bangamakhwenkwe edibaneni elingumakhelwane. Enyanisweni, ukuba oomama bayazi ezinye iziqhelo zokudala umlingiswa wesilisa. Naliphi na umama, xa unyana wakhe ekhula, ubeka umzamo omkhulu ukwenzela ukuba akhule umntu onamandla, onesibindi, onokuqiniseka. Kwaye umnqweno omkhulu ukufundisa i-knight yangempela, ukuze akhule abe ngumncedisi, onomusa, onobubele kunye onenkathalo. Makhe sibone okufunekayo kule nto.
Ngothando kunye nezisombululo. Abazali abaninzi benyana bayaqiniseka ukuba kufuneka bafundiswe ngongqungquthela, bakhawuleze baze bange kancane. Nangona kunjalo, ukwenzela ukuphuhliswa kwengqondo kunye nenkqubela yengqondo yenkwenkwe, ukumbumbana kunye nokumanga ziyanqumla. Indodana encinci kufuneka ixineke, ikhutshwe kwaye ibuhlungu. Yaye umntwana okhulileyo uyaqhubeka efuna ukunxibelelana komzimba. Nangona uneminyaka yobudala, utshintshe encinci - lo ngumpompo onobungane emagxeni, ukulwa ngokudlala kunye noyise kunye nokubetha intloko. Ngaloo nto, inkwenkwe ngokwayo ifunda ukubonisa uthando kunye novelwano, ngoko ke, iqalisa ukufanisa umnqweno wakho oyintloko-imfundo yekhontsi yangempela. Enye into ebalulekileyo kukuzimela. Ukufundisa loo nkwenkwe ukuba agqoke, ahlambe amazinyo aze ahlambulule umbhede wakhe, simncede akhule. Sifuna ukuba umntwana, ngokunokwenzeka, abe nezakhono ezincedo.
Oku kwenza ubomi bethu bube lula. Kodwa sisadinga ukuba unyana angabi nantoni, engabi nenkani, kodwa uthobela. Ewe, ngenxa yoko, njengommiselo, ufumana umntwana okhululekileyo, onomdla kwaye othobelayo. Kodwa ukwenza umntwana enze uvuyo kwaye uphumelele, oku akunako. Siyazi ukuba buninzi ubunzima kunye neengxaki zobomi obudala obuzisa kuthi kwaye kufuneka simfundise umntwana ukuba enze izigqibo ezizimeleyo. Yingakho, okokuqala, kufuneka unike unyana wakho ukuba abonise ukuzimela kwakhe. Kwaye ukuze umnqweno wakho oyintloko uza kuzaliseka, kufuneka umfundise ukucamngca, ukuvavanya iimvakalelo zabantu kunye nezenzo zabo. Nika unyana wakho inkululeko enkulu kwaye amenze enze iimpazamo, funda kwiimpazamo. Ngoko unyuselwa ngumntu ongokoqobo.
Ngezinyembezi ezingadingekile. Amadoda okwenene ayalili! -Ulibale eli binzana ngonaphakade. Akunakucingwa ukuba iinyembezi zabantu zibuthathaka ngokomoya. Kuyingozi ukunqanda imvakalelo kunye neemvakalelo. Mane ufundise umntwana ukuba abonise iimvakalelo zabo azibonisi kwaye azikhuthazi amahlazo. Ukuba unyana wakho unqamle umnwe okanye wawa phantsi, kodwa akazange akhale, uthi: "Ungoyinyani!" Kwangathi uyise unokuba ngumntwana wegunya! Ngoko ungabizi indoda yakho ilahlekile!
Ngamandla. Ukuvelisa uqobo, kufuneka uchazele umntwana ukuba kufuneka abe namandla kwaye anesiqiniseko. Ngaba kunokwenzeka ukuba umntu onamaqhawe ukunyuka kwindoda enembonakalo yakhe yonke ibonisa ukuba akayi kuvumela ukucaphuka? Yaye uyayibona njani loo mntu? Kuphela ukuba unako ukuzithemba ngaphakathi. Omnye uya kuhlala eyiqonda kwaye acinge ngamakhulu amawaka ngaphambi kokubetha. Amandla ukulawulwa kwangaphakathi, kukuthabatha ihlabathi, kungekhona ugonyamelo kunye nokungabikho nto.
Ncinane malunga nokunyamekela. Ncedise nayiphi na isicwangciso somntwana ukuncedisa, musa ukulingana kwaye ungamangaleli, nokuba kukho into engayisebenzeli yona. Yenza iimeko apho unyana wakho omncinci angabonakalisa njengommeli wesini esomeleleyo. Mxelele amabali malunga namadoda amancinci agqoke iipotfoliyo zamantombazana, anike indlela yokuthutha kwaye ngokuqhelekileyo aziphathe njengama-knights ngokubanzi! Yaye ukuba unyana uziphatha ngendlela ofundisa ngayo, ngoko umnqweno owona mkhulu ukuvelisa uqobo!
Ngaba ndifuna ukunika abantwana bam imali esikhwameni?
Indima kayise ekukhuliseni abantwana, ukucebisa abazali
Indlela yokunika abantwana isiyalo
Impembelelo yokuqhawula abantwana
Biography kaCharlie Chaplin
Ukupheka kweebhisi ezivela kwiziqhamo ezintsha kunye nemifuno
Indlela yokwenza iindidi zezimbali
Ukuphulukisa iipropati zengxube yeginger
Inomdla ukujonga ngaphandle kokwenza?
U-Ivan Urgant watshata nomfazi womntu
Indlela yokuba ngumfazi wangempela
Kuze kube nini ugcine ubuhle nobutsha
I-Biography yomdlali we-actrice uLyubov Orlova
Omelette ene broccoli
UZemfira wachaza indlela esaphila ngayo ukulahlekelwa yintsapho yakhe